DHAGEYSO: Qorshaha Axmed Madoobe & Kenya oo halis gelinaya Shacabka Jubbaland | SMC
Home WARARKA MAANTA DHAGEYSO: Qorshaha Axmed Madoobe & Kenya oo halis gelinaya Shacabka Jubbaland
Ciidamada Kenya ee ku sugan qeebo kamida somaliya gaar ahaan deegaano iyo degmoyin katirsan mamulka jubbaland ayaa inta badan waxa lagu eedeeyaa in ay tacadiyo kadhan ah aadanaha ay ugestaan shacabka ku dhaqan deeganada Jubbaland.
Waxaa inta badan ciidamada kenya ay fuliyaan duqeemo ay sheegeen iney labartilmaameysanayan alshabaaab hasa ahaateee ay wax yeeelo kasoo gaadhan dad shacab ahaaa kuwa oo aaan waxbo galabsan.
Gudoomiyaha Magaalada Garbahaareey eee gobolka gedo Cabdi Bare oo Simba lahadalay ayaa sidaasi sheegay waxa uuna sheegay in Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed maxamed islaam axmed Madoobe iyo Ciidamada kenya ay iska kaashanayaan Abaabulka duqeemo kadha ah dadka shacabka ah ee gobolka gedo islamarkaana lala bartilmaamedsanaya sababa laxidhiidha qorshaha kenya ay dooneyso taa oo cadaawad iyo naceeb ay uqabto dadka somaliyed.
Waxa uu sido kale sheegay in duqeymaha iyo weeraradda shacabka lagu gumaadayo ay qeyb ka qaaadanayaan Madaxweyne Axmed maxamed Islam axmed madobe kaa uu sheegay inuu doonayo in uu qalalaaso galiyo Deeganada ay maamulaaan Ciidamada xooga somaliyed iyo maamulka dadka shacabka ay dhisanayan.
Previous articleFaahfaahin: Dagaalo culus oo ka dhacay Buur-dhuubo iyo Saraakiil ka hadashay
Next articleAxmed Karaash oo diiday magacaabidii Golaha Wasiiradda ee xalay Deni magacaabay